Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Sheekh Axmed oo weerar afka ah ku qaaday Madaxda dowladda. – Weheliye.com
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Sheekh Axmed oo weerar afka ah ku qaaday Madaxda dowladda.
September 23, 2019 A.Hussein Wararka 0
Muqdisho(weheliyeOnline).Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa uu si kulul u weeraray madaxda dowladda soomaaliya, isagoona ku eedeeyay in ay ku xadgudbeen sharciga dalka.
Shiikh Shariif ayaa shirkiisa jaraa’id ku soo hadal qaaday in xayiraadii shalay la saaray, waxaa uuna xusay in arintaasi uu aad ugu xun yahay, islamarkaana aan xiligan madaxda dowladda soomaaliya loogu baahneen in ay tilaabadaasi qaado.
“Muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu uu safro meesha uu doonayo, islamarkaana aan laga hor istaagi Karin, aniga iyo Madaxweyne Farmaajo waa u simanahay sharciga, cidna kama sareeeyo sharciga”. Ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sidoo kale Shiikh Shariif ayaa waxaa uu sheegay in cid ka celin karta garoonka aysan jirin, islamarkaana waqti uu rabo meesha uu doono uu aadayo.
Faah-faahin Qarax xoog leh oo caawa ka dhacay Isgoyska Shaqaalaha ee magaalada Muqdisho.
Daawo:-Sh.Shariif “Farmaajo asigoo boorso wata ayaan magacaabay “